Edith Schippers dia mila ny mombamomba ny ADN anao Martin Vrijland
Home » ankapobeny » Edith Schippers dia maniry ihany koa ny mombamomba ny ADN
Navoaka tamin'ny May 1, 2017 ao ankapobeny | Mivoaka ny tsetsatsetsa ho an'i Edith Schippers dia mila ny mombamomba ny ADN anao
Ny Minisitry ny fitondrana Edith Schippers (fantatrao io vehivavy madinidinika an'io fananganana kabinetra io) dia tsy ny vahoaka ihany no te-hijaly noho ny fikarakarana ireo taova amin'ny vatany mbola tsy misy fanafody sy ny fivarotana taova. manome tanana fanampiana; Tsy maniry fotsiny ny olona ara-psikolojika izy pressurizing mba hipoitra ireo viriosy voapoizina amin'ny otisma izay miteraka mivalo; Tsy maniry zaza tsy ampy taona fotsiny izy ary tsy afa-miala amin'ny fitsapana fitsaboana Azo ampiasaina; Tsy tiany koa ny olona izay lasa misavoritaka amin'ny alalan'ireo lalàna sy fitsipika rehetra ireo ao anatin'ity firenena ity ny fisorohana ny fanaraha-maso mitandrema ary maninona miaraka amin'ny fanafody en Tsy vitan'ny hoe tiany hihinana ny vilany AOW ny fanjakana amin'ny fametrahana ny ketraka eo an-tokotanin'ny jerany, ka ny pilina famonoan-tena hanomboka hitelina; Tiany izao koa izy ny sarin'ny ADN. Toe-pahaizana mahafatifaty malaza Edith!
Mazava ho azy fa miteraka ny fanoherana ara-politika ilaina izany, satria izany no fomba fiasan'ny lalao ara-tsaina ireo en fanoherana-kevitra izany. Manolotra lalàna ianao; Aoka hisy resaka momba izany; Avy eo manaraka adihevitra isan-karazany ao amin'ny haino aman-jery, ary nandà ny volavolan-dalàna mety na dia indray mandeha; fa avy eo dia tonga ny governemanta manaraka vanim-potoana, ary manosika ny lalàna amin'ny alalan'ny Mbola. Azonao atao koa ny maka ny tricks izay mihevi-tena ho ambony. Midika izany fa ao anatin'ny volavolan-dalàna izay takinao mihoatra noho izay tianao, ary amin'ny farany rehefa avy manaisotra ny antoko Party na ny Biby na Groenlinks (na iza na ny anjara andraikitry ny fanoherana-kevitra izany manatanteraka), kanefa mba hahatongavana amin'ny tanjona voafaritra. Izany no Hegeliana dialectic izay ahafahantsika miaiky amin'ny ampahany kely amin'ny politikan'ny tany, fa koa manerana izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao, dia ny VVD tanora io fikomiana io (antilety).
Inona no tadiavin'i Schippers amin'ny ADN ary ahoana ny fomba hanatanterahany izany? Eny, ny ADN dia tena ilaina ho an'ny ...